नेपाल आज | नयाँ प्रहरी ऐन : सेवाहदबारे प्रहरीभित्रै विवाद, के पर्छ असर ?
नयाँ प्रहरी ऐन : सेवाहदबारे प्रहरीभित्रै विवाद, के पर्छ असर ?
काठमाडौं : नयाँ प्रहरी ऐन बन्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि नेपाल प्रहरीमा सेवाहदबारे विवाद चर्किएको छ । केही प्रहरी अहिलेको ३० वर्षे सेवाहद कायमै राख्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्काथरी हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । दुईथरी लबिङका कारण गृह मन्त्रालयका अधिकारी नै अन्योलमा परेका छन् ।
अहिले प्रहरी संगठन संघीय संरचनामा जाँदा पनि सेवाहद हटाउन नसके कहिल्यै हटाउन नसकिने कतिपय प्रहरी अधिकृतहरूको भनाइ छ । ‘यसबाट राज्यलाई पनि करोडौँ फाइदा हुन्छ, संगठन पनि थप बलियो हुन्छ,’ एक प्रहरी अधिकृत भन्छन् । सक्रिय उमेरमै सेवाहदका कारण अवकाश दिँदा संगठनले तालिमप्राप्त जनशक्ति गुमाउने र अर्कोतर्फ पेन्सनभारसमेत बढ्ने उनको भनाइ छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो।
नेपाल प्रहरी सेवाहद
पेचिलो बन्दै राजनीतिक घटनाक्रम, प्रधानमन्त्री परामर्शमा, आज पत्रकार सम्मेलन गर्ने
बुढी गण्डकीका लागि २५ अर्वको मुआब्जा वितरण, अझै विवाद भएन साम्य